Herinandro 7, Bug Free, ary famoahana rindrambaiko mahomby | Martech Zone
Herinandro 7, Bug Free, ary famoahana rindrambaiko mahomby
Talata, Oktobra 9, 2007 Alakamisy, Jona 11, 2009 Douglas Karr
Herinandro 7 ity amin'ny asako vaovao ary herinandro tsy mampino ny fankalazana. Our Famandrihana an-tserasera manavaka ny tenany amin'ny valin'ny fifaninanana any ivelany any ary manao izany haingana. Amin'ny herinandro ambony dia manidina ho any Tampa izahay hiresaka amin'ny franchise trano fisakafoanana iray hafa, iray amin'ireo lehibe indrindra eto amin'ny firenena.
Ny mahasarika ireo mpanjifa ireo dia tsotra. Mahazo ny baiko any amin'ny trano fisakafoanana izahay. Izay no resahina, sa tsy izany? Rehefa manafatra amin'ny Internet ianao dia manantena ny handray ilay vokatra - haingana sy marina. Ny sasantsasany amin'ny fifaninanana dia miahiahy ny tenany amin'ny fidirana an-tsokosoko sy ny fampidirana tena ilaina. Na dia tsara tarehy aza izy ireo dia tsy mahazo ny filaminana any amin'ny trano fisakafoanana. Raha tsy afaka manome filaminana marina ara-potoana ianao ary matokia fa nahavita azy… dia mila miala tsotra amin'ny orinasa ianao.
Misy orinasa 'manidina-alina' izay nanamboatra vahaolana garazy etsy sy eroa, ary misy orinasa hafa any izay manana hevitra tsara nefa tsy afaka mamonjy azy ireo fotsiny satria tsy ampy talenta na mpitarika. Niditra amina orinasa izay manana ny tsara indrindra amin'ny tsara indrindra aho. Manana talenta indostrialy lavitra izahay, mpanao mari-trano sy mpamorona tsy mampino, ary indrindra ny filan'ny nofo rehetra hampivondrona azy rehetra.
Manomboka, Patronpath dia nanapa-kevitra ny hampiasa vola amin'ny olona manan-talenta, vahaolana matanjaka, ary nanomboka niasa tamin'ny indostria izy ireo. Manomboka mandaitra izao. Ny maritrano ao ambadiky ny fampidirana Point-of-Sales antsika dia rafitra fandefasan-kafatra iray izay hireharehan'ny mpivarotra lehibe indrindra manerantany. Ny hany zavatra tsy nananan'ny orinasanay dia teknolojia hitarika ny fifamoivoizana… teo no nidirako.
Heveriko fa ny asako dia mitovy amin'ny tovolahy manofahofa ny saina any Nascar. Tsy dia manan-talenta toa an'ireo mpamily mihazakazaka aho, na ny tompony, na mahatalanjona toy ny ao ambanin'ny hood. Saingy mibanjina ny masoko amin'ilay hazakazaka aho, manangana ny saina mavo rehefa manana olana isika, manofahofa ilay mena rehefa tsy maintsy mijanona isika, ary manofahofa ny saina misy zoro raha manao ny fe-potoana farany tokony horaisintsika isika. Fanamby tsy mampino nefa misy fipoahana manodidina an'ireto pro ireto! Ary zazalahy ve isika mihetsika haingana!
Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy dia nahavita sy namoaka Call Center Enterprise Integration izay noforonin-tsika ny Call Center izay efa hitan'izy ireo tsara indrindra. Io no volavolam-bokiko voalohany Patronpath, Ka tena nahatsapa aho fa mila mikapoka fihodinana an-trano izahay. Ny ekipan'ny fampandrosoana dia naka ny zavatra notadiaviko ary nanamboatra fanatsarana maro izay mihoatra ny antenaina rehetra. Miasa tsy misy kilema izy ary azo ovaina amin'ny fampiasana hafa maro.
Ny fivoriana fanekena dia iray amin'ireo nahafinaritra indrindra natrehiko… tsy nisy fanontaniana ary naharitra 10 minitra izany. Nasehonay ny fampiharana ary neken'izy ireo izany. Nataon'i!
Namoaka programa marketing mailaka mpanamory fiaramanidina ho an'ny mpanjifa National Restaurant Indostria izahay. Nomena ahy ny lakile hitondrana ny hafatra sy ny endrik'ilay mailaka. Ny valim-panadinana voalohany dia ny tahan'ny valin'ny indostrialy B2B indroa.
Nentinay niverina ihany koa ny tetikasanay androany ary nahavita ny fanafoanana ny bibikely fantatra farany tamin'ny fampiharana. Miasa mafy amin'ny fanatsarana izahay izao, manao drafitra ho an'ny fanovana fotodrafitrasa (alohan'ny ilana izany) ary mamolavola ny kinova manaraka an'ny fampiharana (alohan'ny angatahina aminy). Manao fanamby ny tenako aho mba hijery akaiky ny loharano rehetra ary hitantana ireo ekipa marobe niasanay ho anay, saingy naharitra 7 herinandro!
Misy manindrona ahy!
Tags: EbayLinkedInfikarohana any an-toeranaMilomilo makasetup linkin
Ho avy ny Andro Action Blog 2007!
10 Oktobra 2007 à 11:54
10 Okt 2007 amin'ny 10:46 PM